Musharaxiinta Mayorada Bristol oo aad u danaynaya codka Dihin ee Somalida iyo kulankii mayorka iyo Jaaliiyadda |
Musharaxiinta Mayorada Bristol oo aad u danaynaya codka Dihin ee Somalida iyo kulankii mayorka iyo Jaaliiyadda
Bristol (Gabiley.net) Iyada oo ololihii doorashada Mayorka Bristol oo ku beegan 5 May 2016 ay xawli ku socoto ayaa waxa maanta qoomiyada Somalida ee magaalada Bristol kulan la yeeshay mayorka hadda jagada haya Mr. George Ferguson, kaas oo ka dhacay xarunta Malcolm X ee xaafadda St Pauls magaalada Bristol.
Kulanka oo ay soo qabanqaabisay Nura Abbe oo ah xubin firfircoon oo ka dhex muuqatay bulshada ay ku dhex jirto, ahna guddoomiyaha ururka Autism Independence, sidoo kale Nura waxay tababare sare ka tahay program-ka la yidhaahdo Early Bird ee waqooyiga magaalada Bristol.
Nura waxay sheegtay in murashaxiinta ay u tagtay una soo bandhigtay in ay la kulmaan qoomiyadaha Somalida ah ee codkoodu dihin yahay, taas oo murashax kastaa uu rabo in ay Somalidu u codayso, waxayse Nura sheegtay murashaxii ugu horeeyey ee ay arrintaa markiiba sida degdega ah uga soo jawaabay uu noqday Mayor Ferguson.
Murashaxiinta u tartamaya mayornimada Bristol iyo xisbiyada ay ka soo kala jeedaan waa kuwan hoose.
Tom Baldwin, TradeUnionist and Socialist Coalition
George Ferguson, Bristol First
Stoney Garnett, Independent
Mayor Festus Kudehinbu, Independent
John Langley, Independent
Christine Townsend, Independent
Waxa Ugu horeynta xaflada kalmada kooban ka jeedisay Nura Aabe waxaanay markii danbe u kala baxday bulshada madasha ka soo qayb gashay iyo Mayorka oo ay si fool ka fool ah su’alaha iyo jawaabaha isku waydaarsaday, iyada oo mar marka qaarna u sharxaysay dadkii goobta ka soo qayb galay ee aan luqada aad u fahmayn waxa la is leeyahay Mayorka u turjumaysay haddii af Somali lagu hadlo.
Waxa isaguna hadalka qaatay Mayorka Mr. George Ferguson oo u sharaxay waxyaabaha uu qabtay iyo waxa uu qaban doono haddii doorashada mar labaad uu ku guulaysto, wuxuuna dadkii madasha ka soo qayb galay aad ugu dhiiri geliyey inay codeeyaan oo bulshada Somalida ee degan magaalada Bristol ee BME (Bristol Minority Ethnic) ay yihiin bulshada ugu badan. Wuxuuna aad ugu dheeraaday in uu guryo badan dhisayo, magaalada ka dhigayo magaalada ugu nadiifsan Bristol iyo waliba magaalada ugu Active-san Yurub.
Mar uu ka hadlayay dambiyada waxa uu aad ugu dheeraaday inay fiican tahay in dhalinyarada loo sameeyo meelo ay ku ciyaaraan lagana dhigo Active wuxuuna sheegay inuu aad ula dhacay Bristol Brothers oo ciyaaro ugu baxay wadanka Sweden, ka dibna ay ururka Somali Forum uu ugu deeqay qadar lacageed oo dhan 1000 (Kun Pound). Taas oo uu jeclaan lahaa haddii uu arki lahaa group-yo kale oo codsiya u soo qorta oo waliba hablo ah sida kubada volley ball-ka ah, iyo groupyo kale oo sida baaskiiladaha ah oo isaga mayorku laftiisu caan ku yahay baskilada.
Waxa kale oo uu sheegay inuu samayn doono group dumar Somali ah oo ka caawin doono waxa bulshada Somalida ah ay u baahan yihiin khaasatan dhinaca dumarka.
Bulshadii halkaa iskugu timi ayaa su’aalo ku waydiisay madashii, dhammaana wuu ka wada jawaabay, goor dhowna naga fila iyada oo muuqaal ah.